‘इटहरी त वेश्या पुरुषको अखडा बनेछ’ इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई खुला पत्र – Bannigadhi Today
‘इटहरी त वेश्या पुरुषको अखडा बनेछ’ इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई खुला पत्र
धनराज साउँद २०७६ असार ८, आईतबार १३:०६
म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु । पुरुषबिना महिला कसरी ‘रण्डी’ हुन्छ ? मेयर सा’ब ! अब इटहरीमा वेश्यावृत्ति बढ्यो रे ? हैन तपाईंकै गाउँ, टोल इटहरीमा कति धेरै वेश्या पुरुषहरू जन्मेका हुन् ? अब कारबाही र न्यूनीकरणका लागि जो त्यो पेशामा संलग्न छन् ति महिलालाई मात्र कारबाही र गाली गर्ने कि, हजारौं लाखौँ खर्च गरेर दुई चारसय पुरुषमाथि पनि कारबाही गर्ने ? तपाईं जत्तिको व्यक्तिलाई यतिसम्म थाहा रहेनछ, ‘रण्डी, वेश्याजस्ता शब्दहरू पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी होइनन्, यी त स्तरहीन र तल्लो स्तरका घृणित शब्द हुन् । तपाईं रण्डी भन्दै कुर्लने ? अब जिम्मेवारी लिनुस् र कारबाही गर्नुस् । लाखौँ खर्च गरेर रण्डीहरूसित रात बिताउन श्रीमती, प्रेमिका भुल्ने पुरुषहरूलाई नाङ्गेझार पार्नुहोस् । कति रहेछन् त बियर खाने र कण्डम किन्ने पुरुषहरू ? हिम्मत छ मेयर सा’ ब ?
यही पेशा गर्नेलाई पनि कुनै शब्दबाट गाली गरेको भए तपाईं वाह वाह नै हुनुहुन्थ्यो । तर, तपाईंले जसरी महिलाहरू नै सुन्न नसक्ने गरी यस्ता शब्द बोल्नु भो, यो पाच्य भएन । चौतर्फी तपाईंमाथि गाली बर्सिएका छन् । म सिधा बोल्छु जे नि बोल्छु भनी यसरी बोल्न छुट छैन । तपाईंले रन्डी भन्दै गाली गर्दा तिनीहरुसित लाग्ने पुरुषहरुलाइ पनि सचेत र ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि एउटा कुरा थियोे । अन्त्यमा तपाईंको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र इमानदार मेयर बन्नु भएको छ । त्यो मानेमा साथ छ । तर, तपाईंले यसरी नै महिलाहरूलाई शिर झुक्ने शब्द र यसरी बोल्नुभयो भने एक दिन तपाईंको विरुद्धमा ठूलो मासले स्पष्टीकरण माग्नेछन् ।
मेयर सा’ब, सबै पुरुष पनि रण्डा हुँदैनन् । श्रीमती छोडेर परस्त्रीसँग जाँदैनन् । यहाँ सबै पुरुष र सबै महिलाको इज्जतको सवाल हो । यो बुझ्नु होला अब बोल्दा तपाईंले केही सच्चिनु पर्छ । गल्ति मान्छेबाटै हुन्छ । मैले यति लेखिसकेपछि पक्कै पनि आम महिलाहरुसँग माफी माग्नु हुनेछ । तपाईंकी आफ्नै आमा, श्रीमती र छोरीसँगसमेत । यदि साच्चिकै महान हुनुहुन्छ भने ! याे समाचार महिला खवर अनलाइनबाट साभार गरिएकाे हाे ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका, राष्ट्रिय, विचार/ब्लग